Imveliso Yobunkokeli | Isilimela 2022
Iindidi ze-4 zeZitayile zoLawulo kwi-Master ukuze ube yiNkokeli eNamandla
Ngaba ufuna ukuba yinkokeli engcono nomphathi? Nantsi inkcazo yeendlela ezahlukeneyo zolawulo, kunye nendlela abanokuzomeleza ngayo izakhono zobunkokeli.
Iingcaphuno zamandulo ezili-17 ezinokuKhokelela kwimpumelelo yakho
Le migaqo yokuphumelela kumaxesha amandulo ingabutshintsha ubomi bakho kunye neshishini namhlanje!
Iincwadi ezingama-20 zoLawulo eziBalaseleyo eziya kukwenza ukuba ube yiNkokeli eyiNtloko
Ngaba ufuna ukuba yinkokeli engcono kwaye uphucule izakhono zolawulo lwabantu bakho? Nazi iincwadi ezingama-20 zolawulo oluya kwenza ukuba ube yinkokheli enkulu.
Iimpawu ezili-14 zobunkokeli ezinamandla ezinazo zonke iinkokeli ezinkulu
Iinkokheli eziphambili zehlabathi zinento efanayo. Ngokufanelekileyo, bafundile kwaye bakhulisa iimpawu zobunkokeli ezili-14 ezibakhokelele kwimpumelelo.
Iimpawu ezili-12 zobunkokeli ezimele ziQatshelwe
Yintoni eyenza inkokeli ibe mbi? Yintoni onokuyenza ukuba usebenzela enye? Nazi iimpawu ezili-12 zobunkokeli ezimbi ekufuneka uziqaphele kwaye uziphathe njani,
Yintoni eyenza iNkokeli elungileyo: Iimpawu ezi-9 eziPhambili zeNkokeli
Yintoni eyenza inkokeli elungileyo? Ukuba ufuna ukuba yinkokeli engcono, funda ngezi mpawu zobunkokeli zili-9 zityhilwe ngezenzo zezinye zeenkokeli eziphambili.
Izifundo ezili-10 zobunkokeli ezivela kwiiNkokeli eziKhuthazayo kwimbali
Izifundo zobunkokeli ezibalaseleyo eziza kukunceda ukuba ube nezinto ezintsha, ubenobugorha kwaye usebenze.
Iinjongo ezili-10 zobunkokeli eziZibekele zona
Ukuba unqwenela ukuba yinkokeli enefuthe, zibekele iinjongo zobunkokeli kwaye uzame ukuzifezekisa. Nazi iinjongo ezili-10 zobunkokeli ezinokuthi ziqwalasele ukumisela ngokwakho ukuthatha ubunkokeli bakho kwinqanaba elilandelayo.
Indlela yokukhuthaza abantu abakungqongileyo kwaye ubakhuthaze
Funda ngendlela yokukhuthaza abantu abakungqongileyo kwaye ubakhuthaze ukuba bafikelele kwimpumelelo yabo. Ngoba? Kuba nawe uya kuzinceda ukuqhubela phambili ngaxeshanye.
Izizathu ezili-9 zokuba kutheni iMicimbi yokuKhuthaza ubuNkokeli
Ukuqonda ukubaluleka kwenkuthazo yobunkokeli kumalungu eqela kunye nokwazi indlela yokwenza malunga nokwakha le yimfuno yezixhobo zeenkokheli.
Izizathu ezi-8 zokuba ukuSebenzisana ngokuBalulekileyo kubalulekile eMsebenzini
Ukusebenzisana akuyiyo nje i-buzzword ootitshala kunye nabaphathi bathanda ukulahla. Ezi zizathu zisibhozo zibonisa ukubaluleka kokusebenzisana.
11 Izakhono zoMbutho eziFunwa yiNkokeli nganye eSmart
Ngaba ujonge ukuba yinkokeli efanelekileyo? Jonga esi sikhokelo kwizakhono ezili-11 zombutho ekufuneka zonke iinkokeli zazi.
Umahluko phakathi kweNkokeli noMphathi
Xa sithetha ngokuba yinkokeli ngokuchasene nomphathi, ayifanelanga ukuba ibenye okanye enye. Xa uqonda umahluko ophambili phakathi kwezi zimbini, ungasebenzisa ezona zibalaseleyo ukuze ube nokusebenza ngakumbi emsebenzini wakho.
Indlela yokuphembelela abantu kwaye ubenze bazive bonwabile
Ukucinga ukuba ungabaphembelela njani abantu babengcono? Sebenzisa impembelelo elungileyo kuyehla ukuya kwizinto ezili-10 ezilula, ke jonga apha!
Izizathu ezili-13 zokuba kutheni unganikezeli nje
Apha kule post kufuneka ufunde into endikhuthazileyo ukuba ukuyeka ayisiyiyo inketho kwaye kukhuthaze abaninzi nabo. Funda kwaye wabelane.
Iindidi ezi-5 zeZitayile zobuNkokeli (kwaye zeziphi ezilungileyo kuwe)
Ngaba ufuna ukwakha iqela lokusebenza eliphezulu? Nazi iintlobo ezi-5 zeendlela zobunkokeli kunye nendlela yokujonga isitayile sobunkokeli esisebenza ngcono kuwe.
Iimpawu ezi-6 zeNkokeli enomdla
Asinguye wonke umntu ozelwe enobuntu obunomdla, kodwa wonke umntu unokufunda ukuba charismatic. Nazi iimpawu ezi-6 zenkokeli enesisa.
Ubunkokeli bokwenene: Yintoni eyahlula iNkokeli kwiBoss
Ubunkokeli abukho ngokukhokela iqela labantu kwaye ukuba ufuna ukuba yinkokeli ephumelelayo, nantsi into ekufuneka uyazi ngayo.
Uqala njani ukuthumela iMisebenzi ngokufanelekileyo (Isikhokelo samanyathelo ngenyathelo)
Ukwabela abanye umsebenzi kwandisa imveliso kwaye kulungelelanisa iqela lakho, kodwa iinkokeli ezininzi zikufumanisa kunzima ukudlulisa imisebenzi. Esi sikhokelo sikubonisa indlela yokwabela abanye umsebenzi.
Umahluko omkhulu phakathi kweBosi kunye neNkokeli
Uthini umahluko phakathi komphathi kunye nenkokeli? Nokuba ungacinga ntoni umphathi wakho, kuthatha ngaphezulu kokulawula nje abantu ukuba babe yinkokeli yokwenyani!